E-boky 7 mora vidy hamonjy vola | Ireo mpamaky rehetra
Villamandos | | mpamaky
Ianao tadiavina e-boky mora vidy? Tato ho ato dia matetika no mihabetsaka ny manana boky elektronika na eReader, na dia ny fomba tsotra indrindra hanomezana anarana ity fitaovana ity dia ny e-book, ka hampiasainay mandritra io lahatsoratra io io teny io, hamakiana sy hankafizanay mamaky amin'ny fotoana sy toerana rehetra indrindra fomba mahafinaritra. Ny isan'ny fitaovana amin'ity karazana ity eny an-tsena dia mitombo, fa anio dia te-hanolotra anao izahay eBook mora vidy ary izany dia mamela anay hankafy ny famakiana nomerika nefa tsy handany vola be.
Izany no antony aorian'ny fikarohana andro vitsivitsy ny tambajotram-pifandraisana ary ny fanandramana ilay boky elektronika hafahafa aza dia nanapa-kevitra ny hamoaka ity lahatsoratra ity izahay. Boky elektronika 7 mora sy tsara indrindra hankafizanao ny famakiana nomerika. Raha te hividy ny boky e-nao voalohany ianao na tsy te handany vola be loatra dia manaova pensilihazo sy taratasy handraisana naoty satria ny iray amin'ireo fitaovana hasehonay anao ireo dia mety ho anao indrindra amin'ny na tranga izany.
1 Fampitahana eBook mora vidy
2 Fandrehitra ifotony
5 Angovo eReader Max
6 Vidiny E03FL
8 Rafitra angovo
Fampitahana eBook mora vidy
Amazon Tsy isalasalana fa iray amin'ireo mpanamboatra manan-danja indrindra eo amin'ny tsenan'ny boky elektronika izy io ary manolotra fitaovana samihafa arakaraka ny karazana mpampiasa sy izay tianay holaniana. ATSINANANA Fandrehitra ifotony, izay nohavaozina vao andro vitsy lasa izay, no fitaovana fampidirana hiantsoana azy amin'ny fomba sasany ary hahafahantsika manomboka eo amin'ny tontolon'ny famakiana nomerika mandritra ny fandaniana vola kely.
Ity Kindle fototra ity dia mety ihany koa ho an'ireo mpampiasa rehetra izay tsy mangataka be loatra amin'ny bokin'izy ireo elektronika ary mitady eBook hampiasaina indraindray fotsiny.
Atorinay anao izao ny endri-javatra lehibe an'ity Kindle fototra ity izay efa misy amin'ny endriny vaovao nanomboka ny 20 Jolay lasa teo;
Refy: 160 x 115 x 9,1 mm
Milanja: 161 grama
Asehoy: 6-inch miaraka amin'ny teknolojia E Ink Pearl miaraka amina teknolojia endri-tsoratra tsara, 16 mizana volondavenona ary vahaolana 600 x 800 teboka ary 167 dpi
Fifandraisana: port USB, Wifi
Fahatsiarovana anatiny: 4 GB manana fahaizana amina boky an'arivony ary fitahirizana rahona maimaimpoana amin'ny atiny Amazon rehetra
Batterie: araky ny fampahalalana nomen'i Amazon dia maharitra herinandro maromaro tsy mila famerenana indray ilay fitaovana
Mpilalao MP3: Tsia
Fomba ebook tohana: Format 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI tsy voaaro, PRC voajanahary; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP amin'ny fiovam-po
Vidiny: 79 euro
Azo antoka fa maro aminareo no ho tratry ny fahitana amin'ity lisitra ity ny Kindle Paperwhite, Fa izany ve Ity fitaovana Amazon ity dia eReader mora vidy, raha jerentsika ireo fiasa mahaliana atolotray antsika ho an'ny vidiny izay azontsika lazaina fa tsy be loatra. Ny kalitao sy ny famaritana ny efijery dia tsy isalasalana, izay hahafahantsika mamaky amin'ny tontolo sy toerana rehetra koa satria manome hazavana miharo izy io.
Handinika ny endri-javatra lehibe sy ny mombamomba an'ity fitaovana Amazon ity izahay izao;
Refy: 169 x 117 x 9,1 mm
Milanja: 205 grama
Asehoy: vahaolana avo 6-inch miaraka amin'ny 300 dpi sy jiro miharo
Fifandraisana: WiFi, 3G ary USB
Fahatsiarovana anatiny: 4 GB; manana fahaizana amina boky an'arivony
Batterie: Tsy mitaky herinandro vitsivitsy fotsiny i Amazon amin'ny fampiasana mahazatra
Fomba ebook: Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI tsy voaaro, PRC natiora; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP amin'ny fiovam-po
Vidiny: 129.99 euro
Ny vidin'ity Kindle Paperwhite ity dia sarany 129.99 euro, angamba vidiny somary avo, fa izay atolotray antsika ho valiny dia mihoatra ny mahaliana. Raha tsy maika hividy ny eReader vaovao ianao dia tokony ho fantatrao fa ny Amazon indraindray dia mampihena be ny vidin'ny Kindle-ny, ka angamba amin'ny tomany kely sy amin'ny fitandremana dia azonao atao ny mividy azy amin'ny vidiny mihoatra ny mahaliana. .
kobo Miaraka amin'i Amazon, izy ireo no orinasa roa ekena indrindra amin'ny tsenan'ny eReader. Ireo orinasa roa ireo, ankoatry ny fananana boky elektronika matanjaka sy lafo eny an-tsena, dia manolotra ihany koa amin'ny mpampiasa fitaovana mora vidy hafa miaraka amina kalitao mitovy mahaliana ihany koa.
Ohatra iray amin'izany ny ity Kobo Leisosa fa amin'ny vidiny mihoatra ny 100 Euros ho an'ny kely indrindra, dia mety ho safidy lehibe hiditra amin'ny tontolon'ny famakiana nomerika sy hankafizany boky nomerika fatratra.
Manaraka izany dia hodinihintsika ny lehibe Endri-javatra sy famaritana an'ity Kobo Leisosa ity;
Refy: 112 x 92 x 159 mm
Milanja: 260 grama
Sarimihetsika: mikasika ny Pearl E Ink 6-inch
Fifandraisana: Wi-Fi 802.11 b / g / n ary Micro USB
Fahatsiarovana anatiny: 8 GB na izay mitovy, ny mety hitahiry boky hatramin'ny 6.000
Batterie: faharetana eo ho eo ary miaraka amin'ny fampiasana mahazatra hatramin'ny 2 volana
Fomba ebook: EPUB, PDF, MOBI, JPG, TXT ary Adobe DRM
Vidiny: 99 euro
Angovo eReader Max
Angovo Sistem eReader ...
Ny orinasa Espaniola Energy Sistem dia nanolotra fitaovana mahaliana hatrany ho an'ny mpamaky rehetra hatramin'ny nananganana azy. Tato ho ato dia nandefa boky elektronika isan-karazany eny an-tsena izy ireo, ary ny sasany amin'izy ireo dia manana vidiny ambany dia ambany. ATSINANANA Angovo eReader Max Iray amin'izy ireo ary afaka mividy azy isika farafaharatsiny 90 euro.
Manaraka izany, hodinihinay ny endri-javatra lehibe sy mombamomba an'ity eReader ity avy amin'ny Energy Sistem;
Dimensions: 67 x 113 x 8,1 mm
Milanja: 390 grama
Pikantsary: ​​6 santimetatra miaraka amina vahaolana 600 x 800 teboka
Fahatsiarovana anatiny: 8 GB azo esorina amin'ny karatra microSD
Batterie: fahaiza-manao lehibe ahafahantsika mampiasa ilay fitaovana mandritra ny herinandro maro
Endrika endrika ebook: ePub, FB2, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT
Vidiny: 86,80 euro
Ny tsenan'ny boky elektronika dia nitombo be tato ho ato, ary nisy orinasa sasany niditra tao, tsy fantatry ny besinimaro, fa izay nanolotra fitaovana mahaliana antsika na dia ny vidiny mahaliana aza. Ohatra iray amin'izany ny Vidiny E03FL, tsenan'ny Amazon, izay fandaniam-bola fanampiny hatrany.
Ny vidiny dia 75 euro ary tsy isalasalana, ho an'ireo mpampiasa tadiavinay dia mety mihoatra ny ampy izany. Ny fananana boky elektronika dia azo atao, fa azo atao koa fa manana kalitao sy hery tsy manam-paharoa miavaka izy io. Atorinay anao ny mampiavaka azy sy ny mombamomba azy hahafahanao mianatra bebe kokoa momba azy.
Refy: 165 x 37 x 0.22 mm
Milanja: 159 grama
Pikantsary: ​​6 santimetatra miaraka amina vahaolana 800 x 600 teboka
Fahatsiarovana anatiny: 4 GB azo esorina amin'ny karatra microSD
Battery: Lithium-ion miaraka amin'ny androm-piainany hatramin'ny 720 ora
Fomba ebook: CHM, DOC, DjVu, FB2, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT, ePub
Vidiny: 75 euro
Raha kely ny teti-bolanao hahazoana eReader, ity E-boky orinasa PocketBook Mety ho safidy lehibe io ary 89,99 euro ihany ny vidiny, na dia fantatrao tsara aza amin'ity vidiny ity dia tsy hanolotra fitaovana tsy matanjaka loatra izy ireo na mahaliana loatra hahafinaritra ny famakiana nomerika.
Mazava ho azy, raha te hanomboka eo amin'ny tontolon'ny famakiana nomerika ianao, na raha tsy mpamaky mazoto ianao, dia mety ho lafatra ho anao ity fitaovana ity. Ireto ambany ireto dia azonao atao ny endri-javatra lehibe sy ny miavaka an'ity eReader ity;
Refy: 161.3 × 108 × 8 mm
Asehoy: e-ink 6-santimetatra misy vahaolana 758 x 1024
Fahatsiarovana anatiny: 4 GB miaraka amin'ny mety hanitarana fitehirizana amin'ny alàlan'ny karatra microSD
Batterie: 1.800 mAh
Fomba ebook: PDF, TXT, FB2, EPUB, RTF, PDB, MOBI ary HTML
Raha ny Sora-jiro Energy eReader Hitanay fa lafo loatra ity fitaovana ity, manana safidy mailaka mora foana izahay avy amin'ilay orinasa iray ihany. Ary ny fampidinana kely ny fihamboantsika no ahazoantsika ny Energy Sistem eReader Slim, boky elektronika mora vidy miaraka amin'ny tombony azony izay mety mihoatra ny ampy ho an'izay rehetra tia mamaky.
Raha te hahafantatra lalindalina kokoa ny zavatra omen'ity eReader anay ianao dia asehonay anao izany endri-javatra lehibe sy ny miavaka;
Refy: 113 x 80 x 167 mm
Milanja: 399 grama
Screen: 6 santimetatra miaraka amina vahaolana 600 x 800 teboka. Eink Pearl HD, ambaratonga mainty 16 haavo volondavenona.
Fahatsiarovana anatiny: 8 GB miaraka amin'ny mety hanitarana azy amin'ny alàlan'ny karatra microSD
Batterie: lithium maharitra
Fomba ebook: ePub, FB2, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT
Vidiny: 69.90 euro
Mazava ho azy fa tsy miatrika ny iray amin'ireo boky elektronika tsara indrindra eny an-tsena isika, saingy mety ho safidy tsara, tena ara-toekarena ary hahafahantsika mankafy amin'ny famakiana nomerika amin'ny fomba mahaliana kokoa.
Efa nanapa-kevitra ve ianao hoe iza no eReader an'ireo nasehonay anao fa hovidinao?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay. Ampahafantaro anay ihany koa raha manampy eBook mora kokoa amin'ity karazana ity ianao amin'ny lisitra, miaraka amin'ny vidiny mihena, ary izany dia afaka mampifaly anay amin'ny famakiana nomerika.
Raha te hahita maodely eReaders misimisy ianao, ity rohy Ho hitanao ny tolotra tsara indrindra hahafahanao misafidy izay mifanaraka tsara indrindra tadiavinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » E-boky mora vidy
Miarahaba anao maraina. Manana mpamaky sambany aho, manokana angovo eReader Screenlight HD ary tsy haiko ny mividy boky hampidinana azy ireo. Betsaka ny tranonkala no milaza amiko fa tsy mifanaraka amin'ny erarako ny ebook-ny. Azonao atao ve ampio aho?, Misaotra